Qoricha - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 3:57 4 Onkololeessa 20213:57 4 Onkololeessa 2021
Bu'aaleen nama biraatiif gaarummaa raawwachuu maal fa'i?
Waggoota dhiyoo keessatti ogeessooti xiinsammuu wa’ee gaarummaa dhala namaa fi bu’aa isaa irratti hubannaa gadi fageenyaa argataniiru. Garuu akka Kilaawudiyaa Hammoond barreesitutti, ammayyuu wanti gutummaan hin baramne hedduu jira.
...tti maxxanfame 8:41 2 Onkololeessa 20218:41 2 Onkololeessa 2021
Qorichi Covid haaraa dhukkuba cimaa walakkaan hir’isa jedhame
Qorichi Koronaavaayiras wal'aanuuf yaaliirra ture dhukkuba cimaa yookaan du'a harka walakkaan akka hir'isu, bu'aan qorannoo kilinikaalaa mul'ise.
...tti maxxanfame 4:55 12 Hagayya 20214:55 12 Hagayya 2021
WHOn qoricha busaa dhukkubsattoota Covid irratti yaaluuf
Qorichi biqiltuu Artemisia jedhamu irraa hojjetamu Maadaagaaskaritti koronaavaayirasii ittisuuf faayidaarra oolera.
...tti maxxanfame 4:40 3 Ebla 20214:40 3 Ebla 2021
Qorattoonni akkamitti dhiphachuun akka harrii namatti baasuufi fala isaa bira ga'an
Qorattoonnis wayita qorannoo hantuutawwan irratti gaggeessaniitti buqqeen mataa namaa attamiin jijjirama haalluu riiffensaa fidu irratti gahee olaanaa akka qabu hubannee jedhan.
...tti maxxanfame 6:39 26 Muddee 20206:39 26 Muddee 2020
Gaaffiin Itoophiyaa talaallii Covid-19 argachuu attamiin deebi'a?
Itoophiyaan baatiiwan dhufan keessa yoo xinnaate lammiilee harka 20 ta'aniif talaallii Covid-19 akka argattu gochuuf hojjatamaa jiraachu Ministirri Fayyaa Dr Liyaa Taaddasaa mana Maree bakka bu'oota ummataatti himan.
...tti maxxanfame 5:52 19 Muddee 20205:52 19 Muddee 2020
Dubartii osoo hin beekin lubbuu miiliyoona hedduu du'a oolchite
Seenaa qorichaa keessatti namooni Heniriyettaa Laaksi caalaa lubbuu hedduu du'a oolchine jechuu danda'an muraasadha. Maal dalagde?
...tti maxxanfame 7:05 15 Muddee 20207:05 15 Muddee 2020
Wal'aansa fayyaa karaa bilbilaatiin Afaan Oromoon
Video caption: Mala wallaansa fayyaa karaa bilbilaatiin ummataaf afaan Oromootiin tajaajila kennuMala wallaansa fayyaa karaa bilbilaatiin ummataaf afaan Oromootiin tajaajila kennu
...tti maxxanfame 6:03 15 Muddee 20206:03 15 Muddee 2020
'Uummanni keenya manuma isaa taa'ee yaala barbaachisaa akka argatu feena'
Tajaajilli karaa bilbilaan ogeessa fayyaa waliin haasa'uun yaala argachuu 'Tele medicine' jedhamu, biyyoota guddatanitti yeroo dheeraaf dhimma itti bahamaa jiraatus Itoophiyaatti hedduu hin baratamne.